Apple ine zvikonzero bhiriyoni zvekubudirira neAugmented Reality | IPhone nhau
Apple ine zvikonzero zvine bhiriyoni zvekubudirira neAugmented Reality
Apple inogara ichipomerwa mhosva yekunonoka tekinoroji nyowani, asi chokwadi ndechekuti muzviitiko zvakawanda inyaya yechipiri isingatariswe nevashoma, nekuti chinhu chakakosha kwazvo hakusi chekutanga kudzidzisa chimwe chinhu, asi kuve wekutanga ita kuti vanhu vashandise. Kuuya kweAugmented Reality (AR) kune iyo iPhone neIpad kwave kusiri kusarudzika, uye zvakare zvinoita kunge Apple ichaita kuti vanhu vazive kuti chii, uye zvirinani, kuishandisa.
Iko kuratidzwa kweARKit, chishandiso chevagadziri kuti vagadzire maAapp mafomu eIOS, chakange chiri chishamiso chaicho kuWWDC yekupedzisira munaJune. Uye vagadziri vacho vakabheja zvakanyanya pairi, sezvataona mune kumwe kufambira mberi kudiki uko vamwe vakatipa. Kunyangwe IKEA yakabatana neApple uye inogona kuve nenguva yayo yekubwinya mune inotevera mharidzo yeiyo iPhone 8. Uye kukwikwidza? Panguva ino ivo vanongofanirwa kutarisa uye kuruma nzara dzavo.
1 Google neProjekti Tango, pane chero munhu anoyeuka?
2 Dhatabhesi yemamirioni emidziyo inoenderana
3 Vagadziri ndiyo kiyi
Google neProjekti Tango, pane chero munhu anoyeuka?
Apple haisi yekutanga kupinda mubhizinesi idzva iri rinovimbisa kufambisa angangoita mamirioni zana nemakumi masere emadhora gore ra180.000. Yaive Google makore matatu apfuura! iyo yatinogona kutaura kuti kutanga kubheja neAR. Yake Project Tango yakavhurwa kutanga kwa2014 nechinangwa chekuunza AR kumidziyo mbozhanhare uye nekuchinja nzira yatinoona nayo zvinhu.. Kusiyana neReal Virtual Reality (VR) inonyudza iwe mune inofungidzira nyika, izvo AR zvainoita zvinowedzera dura kune iyo chaiyo nyika neruzivo rwakawanda kupfuura rwunogona kuona nemeso edu pachavo.
Chaizvoizvo kana munhu akaverenga zvinangwa neProjekti Tango zvakafanana neApple neARKit yayo, asi nepo yekutanga ichinge yakanganikwa nevazhinji vagadziri nevagadziri, iyo yekupedzisira yakagamuchirwa pakarepo nevakagadziri, uye kwete inoda vagadziri nekuti Apple ndiyo imwe chete inogadzira michina yayo. Panguva ino hapachina michina yakati wandei inoenderana neProjekti Tango (izvi ndizvo zvinotivimbiswa naBloomberg) Uye imhaka yekuti izvo zvinodikanwa neGoogle zvinosanganisira yakakosha 3D kamera yakagadzirwa neIntel uye inonzi RealSense. Izvi, pamwe chete nekuparadzaniswa kukuru kuripo mu = Android nyika, zvinoreva kuti chimwe chinhu icho Google yanga ichishandira kwadarika makore matatu hachina kana chakakanganisa mukuita.
Dhatabhesi yemamirioni emidziyo inoenderana
Apple, yechikamu chayo, ine hwaro hwemabhirioni e1000 zvigadzirwa pasi rese. Ichokwadi kuti havazi vese vanozokwanisa kugadzirisa kuIOS 11, asi isu tichaita fungidziro yakachengetedzeka uye ngatiti 50% inoita. Icho hachisi chimwe chinhu chisina musoro kana tikatarisa izvozvi izvozvi 86% yemidziyo yakagadziridzwa kuIOS 10 (zviyero zvepamutemo kubva muna Chikunguru 5, 2017). Kutanga ne iPhone 6s uye SE, ese emhando dze iPhone anotsigirwa, uye ese iPad Pro, iPad 2017 inotsigirwawo. Mhedzisiro mhedzisiro ndeyekuti Apple ichave nemamirioni emidziyo inoenderana neAugmented Reality kubva kuvhurwa kweIOS 11.
Ichokwadi kuti zvinonyanya kuitika kuti iyo iPhone 8 (kana Pro, kana chero zvazvinodaidzwa) ichabatanidza iyo 3D kamera iyo inozoipa iyo yega AR mabasa., asi zvimwe zvese zvigadzirwa zvichakwanisa kuzvishandisa, pachokwadi vagadziri vacho vari kutoratidza tumwe tudyo tudiki yezvingaitwe nechishandiso ichi chitsva chakapihwa naApple. Uye sekutaura kwedu, akanakisa achiri kuuya nekuzivisa kweiyo Apple terminal.
Vagadziri ndiyo kiyi
Apple yakatoratidza kuti Pikachu anotaridzika sei muKokemon Go nyowani inoshandisa ARKit, uye tinoziva zvakare kuti IKEA iri kushanda pamwe neApple kugadzira chikumbiro chinokutendera kuti uone fenicha yako yakaiswa mumba mako kuti uone maitiro avo. Chinhu chitsva che smartphone kana piritsi hachisi chinhu pasina rutsigiro rwevagadziri vanogadzira zvinoshandiswa vanozvishandisa., uye ipapo Apple yatungamira. Vangani mamirioni vashandisi vanoshandisa iyo IKEA app nguva pfupi mushure mekutanga kwayo?
Kunyange iyo iPhone yaive yekutanga smartphone, kana iyo Apple Tarisa iyo yekutanga smartwatch, kana iyo iPad iyo yekutanga piritsi. Apple haisati yave yekutanga kushandisa AR pamidziyo yayo, asi ichave yekutanga kuwana mamirioni avanhu kuti vaishandise, uye pakupedzisira ndizvo zvakakosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple ine zvikonzero zvine bhiriyoni zvekubudirira neAugmented Reality
Usapotsa ruzivo rweiyo Tour de France neayo yepamutemo app